मुवाथाइले लोकप्रियताको शिखर चढ्दै छ : गणेशलाल कक्षपति : नेपालमाला
मुवाथाइले लोकप्रियताको शिखर चढ्दै छ : गणेशलाल कक्षपति
गणेशलाल कक्षपति नेपाली खेलकुद वृत्तमा नयाँ र नौलो नाम होइन । लामो समय सक्रिय खेलाडीका रुपमा बिताएका कक्षपतिले अहिले नेपाल मुवाथाइ संघको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् । वि.सं २०५१ सालमा क्योकोसिन करातेमार्फत खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय भएका उनले सन् २०१० मा नेपाल मुवाथाइ संघको स्थापना गरेका थिए । संघको केन्द्रीय अध्यक्षका साथै प्रमुख प्रशिक्षकका रुपमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएका कक्षपतिकै पहलमा नेपालले मुवाथाइको वल्र्ड च्याम्पियनसिपमा समेत स्वर्ण पदक जितिसकेको छ । सरल, सादगी, इमान्दार र मृदुभाषी कक्षपतिसँग नेपालमा आयोजना हुन लागेको मुवाथाइको एसियन च्याम्पियनसिप र नेपालको तयारीका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी :
नेपाल मुवाथाइ संघले एसियन मुवाथाइ च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न लागेको छ, यसका बारेमा बताइदिनुस् न ?
वल्र्ड मुवाथाइ फेडरेसनअन्तर्गत ३२ राष्ट्र छन् । यही ३२ राष्ट्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले एसियन च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न लागिएको हो । यो प्रतियोगिता गत नोभेम्बरमा नै गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, वल्र्ड मुवाथाइ फेडरेसनले नै यही मार्चमा वल्र्ड च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न लागेकाले मार्चपछि नै एसियन च्याम्पियनसिपको टुंगो लाग्नेछ । अर्को वर्ष नेपालले मनाउन लागेको बहुप्रतिक्षित नेपाल भ्रमण वर्ष कार्यक्रमलाई समेत टेवा पु¥याउने किसिमले प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछौं । यो प्रतियोगिता जसरी पनि नेपालमै आयोजना हुन्छ । राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको प्रतियोगिता भएकाले पनि यसलाई कसरी सब्य र भब्य रुपमा आयोजना गर्ने भनेर हामी लागिपरेका छौं ।
च्याम्पियनसिपमा ३२ राष्ट्र नै सहभागी हुन्छन् त ?
३२ राष्ट्र नै त सहभागी नहोलान् तर पनि १० भन्दा बढी राष्ट्रको सहभागिता हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।
खेलाडीको इन्ट्री कसले गर्छ त ?
खासमा एसियन च्याम्पियनसिप आयोजना गर्ने पालो इन्डोनेसियाको हो । त्यहाँको अस्थिर राजनीतिका कारण इन्डोनेसियाले आयोजना गर्न नसक्ने भएपछि नेपालले च्याम्पियनसिप आयोजनाको अवसर पाएको हो । हाम्रो प्रस्तावलाई वल्र्ड मुवाथाइ फेडरेसनले स्वीकार गर्दै हामीलाई यो अवसर प्रदान गरेको हो । त्यही कारण खेलाडीको इन्ट्री पनि हामीले नै गर्ने हो ।
यति ठूलो प्रतियोगिताको तयारी चाहिँ कस्तो भइरहेको छ ?
सबै तयारी गरिसकेका छौं । अहिलेसम्म मिति तय नभए पनि हामीले गर्नुपर्ने तयारी थालिसकेका छौं । पहिले दक्षिणकाली नगरपालिकासँगको सहकार्यमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेका थियौं । तर, १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका कारण त्यो बेला सम्भव भएन । अब विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरेर प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने छौं । यस बाहेक खेलाडीको बीमा र खेलाडीको छनोट पूरा भइसकेको छ । उनीहरुले नियमित रुपमा प्रशिक्षण पनि गरिरहेका छन् ।
च्याम्पियनसिपमा कति खेलाडी सहभागी हुन्छन् त ?
हामीले एमेच्योर र सेमी प्रो आयोजना गर्न लागेका हौं । पहिले हामीसँग उपलब्ध खेलाडीलाई हेरेर १२ वटा तौल समूहमा च्याम्पियनसिप गर्न लागेका थियौं । अब पनि यही तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेकाले हाम्रा उपलब्ध खेलाडीलाई मध्यनजर गरेर प्रतियोगिता गर्ने छौं ।
खेलाडीको प्रशिक्षण अहिले पनि भइरहेको छ त ?
हाम्रा खेलाडी अहिले पनि प्रशिक्षणमै व्यस्त छन् । निकट भविष्यमै राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ भने त्यसपछि वल्र्ड च्याम्पियनसिपमा सहभागी पनि हुदै छौं । अहिले एसियन च्याम्पियनसिपभन्दा पनि वल्र्ड च्याम्पियनसिपको तयारीमा हामी लागेका छौं । वल्र्ड च्याम्पियनसिपबाट फर्किएपछि एसियन च्याम्पियनसिपको तयारी तीव्र रुपमा थाल्ने छौं ।
यति ठूलो प्रतियोगिता आयोजना गर्न तपाईहरु सक्षम हुनुहुन्छ त ?
हामीले यसअघि पनि धेरै प्रतियोगिता आयोजना गरिसकेका छौं । त्यसैले यो प्रतियोगिता आयोजना गर्न खासै समस्या छैन । अर्को कुरा नेपालले पनि यति ठूलो प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्छ भनेर विश्वलाई देखाउन पनि हामीले आयोजनाको जिम्मा लिएका हौं । अब प्रतियोगितालाई कसरी भब्य र सब्य बनाउने भनेर लागिपरेका छौं ।
मुवाथाइ त्यति लोकप्रिय खेल होइन, यस्तो अवस्थामा प्रतियोगिताका लागि प्रायोजक पाउन सकिन्छ त ?
मुवाथाइ नेपालमा निकै लोकप्रिय भइसकेको छ । तर, यसका बारेमा कर्पोरेट क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई राम्रोसँग जानकार बनाउन सकेका छैनौं । त्यसैले केही समय पहिले कर्पोरेट हाउसका चर्चित व्यक्तिहरुलाई निम्त्याएर हामीले प्रतियोगिता सञ्चालन गरिसकेका छौं । यसले मुवाथाइलाई हेर्ने दृष्टिमा पक्कै पनि सुधार हुने विश्वास गरेका छौं । अर्को कुरा अहिलेको युवा पुस्तामा यो खेल निकै चर्चित बनिसकेको छ । यसलाई चिनाउन आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन ।
मुवाथाइ कस्तो खेल हो त ?
यो थाइल्यान्डको राष्ट्रिय खेल हो । बर्मा र थाइल्यान्डबीचको युद्धका बेला हतियार समाप्त भएपछि कसरी सुरक्षित हुने भनेर सैनिकहरुले युद्धकलाबाट विकसित गरेको खेल हो, मुवाथाइ । यो चार सय वर्ष अगाडि नै थाइल्यान्डमा सुरु भएको पाइन्छ । यो खेल ‘मोय बरान’बाट विकसित भएको खेल हो । मोय बरान भनेको थाइल्यान्डको परम्परागत बक्सिङ हो । यसमा हिन्दु र बुद्ध धर्मलाई जोडेर त्यसमा बज्ने संगीतलाई पनि समावेश गरिएको छ । यो खेल दक्षिण तथा पूर्वी एसियाका सबै मुलुकमा लोकप्रिय छ । तर, नाम चाहिँ हरेक देशमा भिन्दाभिन्दै छ । नाम फरक भए पनि खेल्ने स्टाइल चाहिँ एउटै छ । सम्पूर्ण शरीरलाई हतियारका रुपमा प्रयोग गरेर खेलिने यसको विशेषता हो ।
नेपालमा धेरै संघ भएका कारण पनि यसले त्यति धेरै लोकप्रियता हासिल गर्न नसकेको त होइन ?
हामीले वल्र्ड च्याम्पियनसिपमा दुई वटा स्वर्ण जितिसकेका छौं । यस बाहेक रजत र कांस्य पदक त धेरै नै जितेका छौं । नेपालमा पनि थुप्रै प्रतियोगिता आयोजना भइसकेको छ । चार पटक त इन्डो–नेपाल प्रतियोगिता आयोजना गरिसकेका छौं । नेपाल मुवाथाइ संघले निरन्तर रुपमा कार्यक्रम गर्दै आएको छ । अरु संघका बारेमा भने मलाई जानकारी छैन ।
प्रशिक्षण चाहिँ कहाँ कहाँ भइरहेको छ ?
अहिले विभिन्न आठ वटा क्लबहरुमा यसको नियमित प्रशिक्षण भइरहेको छ । यस बाहेक पनि दशरथ रंगशालामा हरेक दिन प्रशिक्षण गराइरहेका छौं ।